Bit By Bit - Ethics - 6.6.3 Nzuzo
Nzuzo bụ a nri na kwesịrị ekwesị eruba n'ime ọmụma.
Mpaghara nke atọ ebe ndị na-eme nchọpụta nwere ike ịgbasi mbọ ike bụ nzuzo . Dị ka Lowrance (2012) mee ka o doo anya: "a ghaghị ịkwanyere onye ọzọ ùgwù n'ihi na a ghaghị ịkwanyere ndị mmadụ ùgwù." Otú ọ dị, nzuzo, bụ echiche na-adịghị mma (Nissenbaum 2010, chap. 4) , na, dị ka nke ahụ, ọ bụ ihe siri ike iji mee ihe mgbe ị na-anwa ime mkpebi ụfọdụ banyere nchọpụta.
Ụzọ dị iche iche na-eche echiche gbasara nzuzo bụ na a na-ejikọta dichotomy ọha na eze. Site n'echiche a, ọ bụrụ na ozi nwere ike ịnweta ihu ọha, mgbe ahụ ndị na-eme nchọpụta nwere ike iji ya na-enweghị nchegbu gbasara imebi nzuzo ndị mmadụ. Ma nke a nwere ike ịba n'ime nsogbu. Dịka ọmụmaatụ, na November 2007, Costas Panagopoulos zigaara ndị ọ bụla nọ n'obodo atọ akwụkwọ ozi gbasara ntuli aka na-abịanụ. Na obodo abụọ-Monticello, Iowa na Holland, Michigan-Panagopoulos kwuru / egwu na ọ ga-ebipụta ndepụta nke ndị gụrụ akwụkwọ akụkọ. Na obodo nke ọzọ-Ely, Iowa-Panagopoulos kwere nkwa / egwu na ọ ga-ebipụta ndepụta nke ndị na-atụbeghị akwụkwọ akụkọ. E ji ọgwụgwọ a mee ihe iji weta mpako na ihere (Panagopoulos 2010) n'ihi na a chọpụtawo mmetụta ndị a na-enwe mmetụta dị na nchọpụta mbụ (Gerber, Green, and Larimer 2008) . Ozi gbasara ndị votu na ndị na-abụghị ndị ọha na eze na United States; onye ọ bụla nwere ike ịnweta ya. Ya mere, onye nwere ike ikwu na n'ihi na ozi mkpọsa a adịlarị n'ihu ọha, ọ dịghị nsogbu na onye nchọpụta na-ebipụta ya na akwụkwọ akụkọ ahụ. N'aka nke ọzọ, ihe banyere arụrịta ụka ahụ nwere mmetụta dị njọ nye ụfọdụ ndị.
Dịka ihe atụ a na-egosi, nchịkwa dichotomy ọha na eze na nke onwe ya dị oke njọ (boyd and Crawford 2012; Markham and Buchanan 2012) . Ụzọ kacha mma ị ga-esi eche echiche banyere onye nzuzo-nke a kwadoro iji dozie nsogbu ndị afọ ole na ole mepụtara-bụ echiche nke njigide na- (Nissenbaum 2010) . Kama ịtụle ihe ọmụma dị ka ọha ma ọ bụ na nzuzo, ọnọdụ ndị na-eme gburugburu ụwa na-elekwasị anya na mgbasa ozi. Dị ka Nissenbaum (2010) , "ikike nke nzuzo abụghị ikike zoro ezo ma ọ bụ ikike ịchịkwa kama ikike iji nweta ozi nkeonwe."
Ebumnuche bụ isi nke na-eme ka mmadụ bụrụ eziokwu bụ ihe dị na ya - ihe ọmụma gbasara ozi ọma (Nissenbaum 2010) . Ndị a bụ norms nke na-achịkwa mmụba nke ozi na ntọala ụfọdụ, ha kpebisiri ike site na atọ atọ:
eme ihe nkiri (isiokwu, sender, nnata)
àgwà (ụdị nke ozi)
nnyefe ụkpụrụ (constraints n'okpuru nke ọmụma aga)
Ya mere, ọ bụrụ na ị dịka onye nchọpụta na-ekpebi ma ị ga-eji data na-enweghị ikike, ọ ga-enyere gị aka ịjụ, sị, "Nke a ọ na - emebi ihe gbasara ya - usoro mgbasa ozi gbasara mmekọrịta?" Ịlaghachi na ikpe Panagopoulos (2010) , na nke a, onye na-eme nchọpụta na-ebipụta ndepụta nke ndị nhoputa aka ma ọ bụ ndị na-abụghị ndị nọ na akwụkwọ akụkọ yiri ka ọ ga-emerụ usoro mgbasa ozi. Nke a nwere ike ịbụ na ndị mmadụ na-atụ anya na ozi ga-agba. N'eziokwu, Panagopoulos anaghị agbaso nkwa ya ma ọ bụ iyi egwu n'ihi na ndị isi nchịkwa obodo ahụ chọtara akwụkwọ ozi ndị ahụ ma mee ka ọ kwenye na ọ bụghị ezigbo echiche (Issenberg 2012, 307) .
Echiche nke ihe gbara ya gburugburu - ihe ọmụma gbasara ozi ọma nwekwara ike inyere aka nyochaa ikpe ahụ m tụlere na mmalite nke isi nke gbasara iji oku oku na-agagharị agagharị iji mee njem n'oge ọwapụ Ebola na West Africa n'afọ 2014 (Wesolowski et al. 2014) . N'okwu a, mmadụ nwere ike iche ọnọdụ abụọ dị iche iche:
Ọnọdụ 1: eziga zuru ezu oku na-aga log data [àgwà]; ndị ọchịchị nke na-ezughị ezu legitimacy [-eme ihe nkiri]; maka ihe ọ bụla o kwere omume ga-eme n'ọdịnihu na-eji [nnyefe ụkpụrụ]
Ọnọdụ 2: eziga ikpe anonymized ndia [àgwà]; ka akwanyere ùgwù mahadum na-eme nnyocha [-eme ihe nkiri]; maka ojiji na nzaghachi nye Ebola akasiaha na n'okpuru ndi-isi nlekọta mahadum usoro ziri ezi mbadamba [nnyefe ụkpụrụ]
Ọ bụ ezie na n'ọnọdụ abụọ a na-akpọ data na ụlọ ọrụ ahụ na-asọpụta, usoro mgbasa ozi banyere ọnọdụ abụọ a abụghị otu n'ihi na ọdịiche dị n'etiti ndị omeehe, àgwà, na usoro nnyefe. Ilekwasị anya na otu n'ime njigide ndị a nwere ike iduga nbibi dị mfe. N'ezie, Nissenbaum (2015) ekwusi ike na ọ dịghị nke atọ a nwere ike belata na ndị ọzọ, ma onye ọ bụla n'ime ha enweghi ike ịkọwa ụkpụrụ nke ozi. Ụdị a nke atọ na-akọwa ihe mere mgbalị gara aga - nke lekwasịrị anya na àgwà ma ọ bụ ụkpụrụ nnyefe - enweghi ike ịmepụta echiche nke ihe nzuzo.
Otu ihe ịma aka site n'iji echiche nke ihe gbasara ya - ihe ọmụma gbasara ozi ị ga-esi na-eduzi mkpebi bụ na ndị na-eme nchọpụta nwere ike ọ gaghị ama ha tupu oge eruo ma ha siri ike nghọta (Acquisti, Brandimarte, and Loewenstein 2015) . Ọzọkwa, ọ bụrụgodị na nchọpụta ụfọdụ ga-emerụ mkparịta ụka-ihe ọmụma gbasara ozi nke na-apụtaghị na nchọpụta ahụ ekwesịghị ime. N'ezie, isi nke 8 nke Nissenbaum (2010) bụ kpamkpam banyere "Ịkwụsị Iwu maka Ezi." N'agbanyeghị nsogbu ndị a, ihe gbara ya gburugburu-usoro ihe ọmụma gbasara mmekọrịta ka bụ ụzọ bara uru isi tụlee ajụjụ ndị metụtara nzuzo.
N'ikpeazụ, nzuzo bụ mpaghara ebe m hụre nghọtahie n'etiti ndị na-eme nchọpụta bụ ndị na-ebute nsọpụrụ maka ndị mmadụ na ndị na-ebute ọdịmma onwe ha ụzọ. Cheedị banyere ihe gbasara onye na-eme nchọpụta ahụike ọha na eze, bụ onye na-agbalị igbochi mgbasa nke ọrịa ọrịa na-efe efe, na nzuzo na-ele ndị na-eburu mmiri ozuzo. Ndị nchọpụta na-elekwasị anya na Ịba Mma ga-elekwasị anya na abamuru nke ọha mmadụ site na nyocha a ma nwee ike ịsị na ọ dịghị nsogbu ọ bụla na ndị na-amụba ma ọ bụrụ na onye nyocha ahụ mere nnyocha ya n'enweghị nchọpụta. N'aka nke ọzọ, ndị na-eme nchọpụta bụ ndị na-ebute nsọpụrụ maka ndị mmadụ ga-elekwasị anya n'eziokwu ahụ na onye nchọpụta ahụ adịghị emeso ndị mmadụ ihe n'ụzọ nkwanye ùgwù ma nwee ike ịlụ ụka na e mebiri nsogbu site n'imebi nzuzo nke ndị na-agụ ya, ọ bụrụgodị na ndị na-amụ ihe adịghị ama nledo. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ụfọdụ, imebi nzuzo ndị mmadụ bụ nsogbu na onwe ya.
N'ikpeazụ, mgbe ị na-atụgharị uche banyere nzuzo, ọ ga-enyere gị aka ịkwaga na njikarị nke ọha na eze na nke onwe ya na-atụgharị uche kama ihe gbasara ọnọdụ-usoro mgbasaozi ozi, nke nwere ihe atọ: ndị na-eme ihe nkiri (isiokwu, onye na-ezipụ, onye nnata), àgwà (ụdị ozi), na ụkpụrụ nnyefe (nrụgide n'okpuru ozi a) (Nissenbaum 2010) . Ụfọdụ ndị nchọpụta na-enyocha nzuzo maka nsogbu nke nwere ike ịkpata mmebi iwu ya, ebe ndị ọzọ na-eme nchọpụta na-ele mmebi nke nzuzo anya dị ka nsogbu na onwe ya. N'ihi na ebumnuche nke nzuzo na ọtụtụ usoro dijitalụ na-agbanwe oge, dịgasị iche site na mmadụ gaa na onye, ​​ma dịgasị iche site na ọnọdụ ruo ọnọdụ (Acquisti, Brandimarte, and Loewenstein 2015) , nzuzo ga-abụ isi iyi mkpebi siri ike maka ndị na-eme nnyocha maka ụfọdụ oge na-abịa.